Home » Featured » Ny Davinci New Black Design an'ny Blackmagic dia mamaha ny fanalahidin'ny fanontana izay manatsara ny fanitarana ny hafainganana ho an'ny mpamorona votoaty
Ny votoatiny noforonin'ny mpamorona dia tsy manam-paharoa raha toa ka mitsangana, indrindra rehefa manatrika mpihaino iray izy ireo. Tsy maintsy misy dikany ny atiny sy ny marika ataon'ny mpanamboatra. Mandritra izany fotoana izany, ny mpamorona dia mila mandinika ny habetsaky ny kojakoja ilaina amin'ny orinasa toy ny Blackmagic Design afaka manampy amin'ny fanomezana ho azy ireo amin'ny iraka ampanaovina azy ireo fa tsy ny hamorona ny votoatiny tsara indrindra ihany. Fa koa ny mpihaino tsara indrindra dia afaka mifandray aminy ny marika. Izay no misy Blackmagic Design tonga eo amin'ny sary, ary miaraka amin'ilay vaovao DaVinci Hamaha ny Keyboard an'ny Editor, ny famoronana votoaty dia ho dingana iray mora kokoa ho azy ireo ho an'ny mpamorona votoaty talenta marobe miasa amin'ny indostrian'ny fahitalavitra.
Raha misy n'inona n'inona Blackmagic Design namorona, ivelan'ny majika, no sasany amin'ny famoahana horonantsary avo lenta manerantany. Marina izany, nanomboka ny 2001, ny orinasa amin'ny sinema nomerika dia nanamboatra vokatra nanomboka
Blackmagic DesignDaVinci hamaha ny Keyboard an'ny tonian-dahatsoratra
DaVinci Drafitra fanitsiana ny Keyboard an'ny Blackmagic Design tsy mihoatra izany afa-tsy ny fitendry tsotra. Ity Keyboard manokana ity dia natao ho fitaovana fanovana hafa, izay mampitombo ny hafainganam-pandeha kokoa noho ny totozy. Raha ny marina, ny DaVinci Hamaha ny Keyboard an'ny Editor afaka manampy ny mpanjifa hampiasa tanana roa miaraka amin'ny fotoana mitovy, ary afaka manome azy ireo ny valin-tenim-pikarohana iraisana izay miorina tsara eo amin'ny fitendry.
DaVinci Blackbagic's Resolve Editor Keyboard dia manana endrika famoronana metaly rehetra, izay matanjaka kokoa ary izany no vokatra raha natao ho an'ny mpanonta matihanina izay mandany andro mandritra ny ora sy ora maro ny androny, izay tsy isalasalana fa hiteraka fangatahana vahaolana amin'ny kitapom-bokotra mahazatra izany. Tsy toy ny lakolosy maoderina misy fanalahidy mahavariana, ny lakilen'ny Keyboard dia manana mombamomba an-tendro, izay manamora ny fahatsaran'ny mpampiasa iray. Ny kofehy fanalahidy dia karazana mitovy ampiasain'ny ebraingo misy bokotra ary voamarina avokoa ny lakile rehetra. Ny dial findram-paritra dia vita avy amin'ny vy matevina ary mamela fitaterana sy fanaraha-maso tsara. Ary koa, ny kapila fanalahidy, ny fialan-tsasatra amin'ny tanana ary ny fanalahidy lakile dia azo alaina avokoa ho fialantsasatra, ary toy izany no ahafahana mamelombelona sy manamboatra ny fitendry rehefa mandeha ny fotoana.
The DaVinci hamaha ny Keyboard an'ny Editor mpanjifa tena haingam-pandeha mba ahafahan'izy ireo mampiasa tanana roa rehefa manitsy. Raha te hampiasa ny tanany havanana ny mpanjifa mba hifehy ny toerana amina clip, raha ny tanany havia kosa mametraka teboka sy teboka ary koa ny fampiharana fanovana na ny mifamadika amin'izany, tsy misy fetra maoderina maoderina misakana tsy hanao izany. Miaraka amin'ny DaVinci Hamaha ny Keyboard an'ny Editor ny mpanjifa dia mahay mamindra, manisy marika ary mivoaka, mampihova fanovana, avy eo mihetsika, miverimberina, mandimby ary miverimberina.
Ny fanadihadian'ny fikarohana mikambana ao amin'ny fitendry dia metaly vita amin'ny vy vita amin'ny vy, ka mahatonga azy hahatsapa ho an'ny mpampiasa, ary ho tsapan'izy ireo foana fa manana fifehezana hentitra amin'ny fantsona na fandefasana fanao i DaVinci. Misy koa felana elektronika mitambatra izay mamorona fijanonana farany rehefa ampiasaina amin'ny fanakatonana sy ny toerany, izay eo ambany fanaraha-mason'ny rindrambaiko. Miaraka amin'ny alàlan'ny tsipika marika maro dia malefaka tsara ny valim-pikarohana ary afaka mijanona ao anaty mody jog hamelana horonam-peo voajanahary.
Ho fanampin'ny fanehoan-kevitra fanampiny amin'ny endri-tsarimihetsika DaVinci Resolve Editor Keyboard, Blackmagic Design Hoy ny CEO CEO Pet Petty: “Izahay eritrereto fa vokatra tena mahavariana ity satria manana fahatsapana mampientam-po toy izany. ” Nanohy ny teniny i Petty “Nandritra ny taona maro, ny fanitsiana tsipika dia noheverina ho efa taloha, ary ankehitriny izao dia nampidirintsika ireo tombontsoa ireo ho fanitsiana tsipika maoderina. Tsy mino aho fa tsy nisy olona nieritreritra momba izany taloha ary gaga ny hafainganam-pandeha vitantsika ny manova rehefa mampiasa tanana 2 amin'ny Keyboard Editor DaVinci vaovao! "
Ho fanampin'ny fananana vokatra fanovana horonantsary avo lenta mahavariana. Blackmagic Design dia mahatonga ny tsimihetsika an-tsarimihetsika fotsiny mampientam-po ho an'ireo mpamorona votoaty miasa amin'ny indostrian'ny fahitalavitra ary ireo mpihaino azy. Na inona na inona raha fantsom-peo fakantsary fakana sary an-tsary, mpantsangana famokarana mivantana, na mpanara-dia avo lenta fotsiny, dia tsy hahita fahadisoam-panantenana izy ireo miaraka amin'ny kalitaon'ny sarimihetsika. Blackmagic Design mamokatra ho ampahany amin'ny asa nanirahana azy mba hanampiana ny famokarana tena mamorona.